गत वर्ष डिसेम्बरमा ट्विटरले, प्रयोगकर्ताले आफ्ना पुराना ट्विटहरु डाउनलोड गर्न सक्ने सुविधा घोषणा गर्दै थोरै व्यक्तिहरुलाई ट्विट डाउनलोड गर्ने सुविधा दिएकोथियो ।
यो हप्ता मैले पनि आफ्ना पुराना ट्विटहरु हेर्ने सुविधा पाएँ । आफ्नो सबैभन्दा पहिलो ट्विट के होला, भन्ने कौतुहलता थियो, त्यो पनि पुरा भयो । ८५ एमबिमा अटाएका मेरा करिब ५९ हजार ट्विटहरु एकैपटक आफ्नो कम्प्युटरमा पाउँदा, एउटा बेग्लै किसिमको रमाइलो लाग्यो, किनकी ती प्रत्येक ट्विटहरुले मेरा पछिल्ला चारवर्ष कसरी बित्यो भन्ने कुरा देखाउँछ । मैले विर्सिएका कतिपय आफ्ना व्यक्तिगत घटनाहरु पनि, आँखा अगाडी आए । ती साना साना कुराले कति फरक पार्दोरहेछ भन्ने कुरा ति ट्विटहरु हेर्दा आज थाहा भयो । ट्विटर मेरो पलपलको खबर राख्ने अनलाइन डायरी भएको रहेछ ।
ट्विटरमा साथी कोही नहुँदा, कस्तो र कसरी ट्विट गरिएको रहेछ, अनि कहिले साथी भेटिए, अनि त्यसपछि ट्विटहरु कस्ता भए, मेरो दैनिकी कस्तो रह्यो, ती सबैकुराहरु आफ्ना अगाडी आए । विश्वकप फुटबल हुँदाताको फुटबलमय ट्विटर र तिजको बरिलै टपिक हेरेर अहिले पनि हाँसियो ! ट्विटिएका लिंक हेरेर आफूले अहिलेसम्म कति ब्लग लेखिरहेको रहेछ भनेर पनि एकछिन सोचियो, केही पुराना ब्लगहरु पढ्दा रमाइलो लाग्दैछ ।
ट्विट कसरी डाउनलोड गर्ने?
ट्विटरले ट्विट डाउनलोड गर्ने सुविधा सबैलाई प्रदान गर्दैछ । ट्विटरले आफूलाई पुराना ट्विटहरु डाउनलोड गर्ने सुविधा दिएको छ कि छैन भन्ने कुरा ट्विटरको सेटिङमा गएर हेर्न सकिन्छ । यदि तपाईको लागि पनि ट्विट डाउनलोड गर्ने सुविधा आइसकेको भए सेटिङ्स पेजको तल ‘Request Your Archive’ भन्ने बटन देख्नुहुनेछ ।
“Request Your Archive” क्लिक गरेर ट्विट डाउनलोड गर्न ट्विटरलाई ‘रिक्वेष्ट’ पठाउन सकिन्छ । अहिले ट्विट डाउनलोड गर्न धेरैले रिक्वेष्ट गर्ने कारण, ट्विटरले केही समय पर्खनुस भन्न नि सक्छ वा ट्विटरमा त्यति धेरै रिक्वेष्ट गरिएको छैन भने ट्विटरले ईमेलमा ट्विट डाउनलोड गर्ने लिंक पठाउने जानकारी दिन्छ ।
तपाईको रिक्वेष्ट पाइसकेपछि, ट्विटरले तपाईलाई केही समयपछि ईमेलमा ट्विट डाउनलोड गर्ने लिंक पठाउँछ ।
ईमेलमा आएको लिंक पच्छ्याउँदै ट्विट डाउनलोड गर्ने पेजमा पुग्छौँ ।
डाउनलोडमा क्लिक गरेपछि तपाईको ट्विटहरु .zip file मा डाउनलोड हुन्छ । उक्त .zip file लाई extract गर्नुहोस् । उक्त .zip file भित्र ५ वटा फोल्डरहरु का साथै एउटा readme.txt, tweets.csv file तथा index.html फाइल हुन्छन् । readme.txt फाइलमा ट्विटरले यसलाई चलाउने तरिका उल्लेख गरेकोछ, जुन निम्नानुसार छ!
index.html मा डबल क्लिक गर्नुहोस्, तपाईको ट्विटर अर्काइभ ब्राउजरमा खुल्छ! दायाँ भागमा रहेको वर्ष र महिनामा क्लिक गर्दै आफ्ना पुराना ट्विटहरु हेर्न सकिन्छ । यसका साथै माथि सर्चबारबाट पनि आफ्ना ट्विटहरु सर्च गर्न सकिन्छ ।
फेब्रुअरी २००९ मा खाता खोलिएको भएपनि मैले पहिलो ट्विट चाँही अप्रिल २००९ मा गरेको रहेछु । मेरो पहिलो ट्विटमा एउटा स्माइली :) मात्रै रहेछ ।
— Aakar Anil (@aakarpost) April 8, 2009
तपाईले आफ्ना ट्विट डाउनलोड गर्नुभयो? तपाईको पहिलो ट्विट के रहेछ, तलको कमेन्टबक्समा लेख्नुहोला है।
एक आम नेपाली February 19, 2013 at 11:03 PM
In reply to @thehiddenfact "Nepal is the only country that doesn't havearectangular flag. Switzerland is the only country withasquare flag. #THF" replied as "and Nepal is the only country which have both Sun and Moon in its flag....thats why its the most unique flag in the world"
Ravi Acharya February 19, 2013 at 11:15 PM
हाहा ब्रो believe me, मेरो चौथो ट्वीटमा ब्रोलाइ मेन्सन गरेको रहेछु.. तेश्रोमा प्रमोदले ब्रोलाइ मेन्सन गरेको रिट्वीट अनि पहिलोमा प्रमोदलाइनै मेन्सन.. ;) जे होस् मेरो ट्वीटर सुरुवात गराउने क्रेडिट आकारलाइ र प्रमोदलाइ नै जान्छ.. धन्यवाद साथीहरु.. मलाई यति रमाइलो/राम्रो प्लेटफर्म देखाएकोमा अझ डोर्याएकोमा... :)
Aakar Anil February 20, 2013 at 10:07 PM
धन्यवाद ब्रो । :)